धरौटी राख्ने म्यानपावरको संख्या ५१२ पुग्यो - Kantipath.com
धरौटी राख्ने म्यानपावरको संख्या ५१२ पुग्यो
पाेष्ट पाटी काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजतपत्र लिन धरौटीको लागि बैंक ग्यारेन्टीसहित नगद राख्ने कामलाई अन्तिम समयमा तीव्र पारेका छन् ।
धरौटी राख्न तोकिएको समयसीमा भदौ १८ गते आउन ५ दिन बाँकि रहंदा शुक्रबारसम्म ५ सय १२ कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी रकम प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले जानकारी दिए ।
बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका कम्पनी मध्ये ४ सय ४२ कम्पनीले नगद र ग्यारेन्टी दुवै रकम विभागमा दाखिला गरेको महानिर्देशक भुसालले बताए । १ सय ९२ कम्पनीले मर्जरमा गएर ८९ कम्पनीमा सीमित भएको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिए ।
समयसीमा कम भएको र सेवा लिन आउनेको भीड बढेकोले शनिबार पनि कार्यालय खुला राखेर सेवा दिने भुसालले बताए । विभागमा कार्यरत जनशक्ति बाहेक श्रम कार्यालय ताहाचलबाट पनि कर्मचारी थप गरेर व्यवसायीले फाइल पेश गरेकै दिन नै सेवा दिइरहेको महानिर्देशकको भनाई छ ।
हिजो विहिबारसम्म ४ सय २३ म्यानपावर कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी विभागमा पेशा गरेका थिए । ती कम्पनी मध्ये ३ सय ४४ ले नगद ५० लाख सहित बैंक ग्यारेन्टी विभागमा पेश गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार विदेश पठाएका थिए । १ हजार ८१ मध्ये एकाघरमा व्यक्ति संचालक भएकाहरुले १ भन्दा बढी म्यानपावर चलाउन नपाउने नियम सरकारले ल्याएसंगै त्यस्ता कम्पनीहरु अनिवार्य मर्जरमा गएका छन् ।
सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुरुप व्यवसाय गर्न चाहने म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राख्नको लागि अन्तिम समयसीमा नै पर्खिएको पाइएको छ ।
Previous Previous post: आफ्नै बुहारीलाई ससुराले बलात्कार गरेपछी…
Next Next post: जसले ‘नाङ्लो ठटाए’ पनि सरकार पाँच वर्ष निरन्तर चल्छ – मन्त्री बाँस्कोटा
प्रहरीमा खुल्यो झन्डै छ सय जनालाई जागिर
२४ पदमा ४६४ जनाका लागि नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो
इजरायलको भाषा परीक्षामा दुई हजारभन्दा बढी उत्तीर्ण (नतिजासहित)
२५० जनाकाे लागी जागिर खुल्यो (सूचनासहित)
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले माग्यो कर्मचारी (सुचनासहित)
निजि प्लेटलाई नलाग्ने ट्याक्सीलाई मात्र लाग्ने कस्तो कोरोना हो ?
कोरियाले इपिएस नियममा सुधार
पालमुनि बस्दै सशस्त्र प्रहरी, गृहमन्त्री अनविज्ञ
मकवानपुर जिल्ला प्रशासनको आलोपालो सेवा प्रणाली